Uchungechunge zamazinyo umkhiqizo umugqa ngaphansi kwegama "Ihlathi Ibhalsamu" kuthandwa kakhulu ezikhathini zamuva. Esebenzisa lo mugqa okusetshenziselwa izinjongo prophylactic nokwelapha: ukuvimbela isifo sezinsini futhi imithi yabo esibanzi.
Isifo sezinsini (ukuvuvukala, ukopha) manje sezitholakala ezingaphezu kuka 90% abantu sebebonke. Yiqiniso, kuletha asemrarweni kubantu, futhi imbangela amathuluzi okusesha ukuze kuvinjelwe futhi kwelashwe lesi sifo.
Uchungechunge Production "Ihlathi Ibhalsamu" itholakala amafomu alandelayo: wokuxubha, rinses umlomo, namafutha-ijeli. Isetshenziswa lezi zimali for ekwelapheni izifo ezifana gingivitis - ukuvuvukala izinsini, isifo periodontal - umonakalo izicubu emhlabeni isimo sokungakhethi kwesikhwama sokuvuvukala amazinyo, isifo periodontal - umonakalo izicubu kusuka ukuvuvukala. Odokotela bamazinyo batusa ukusetshenziswa kwezidakamizwa kule umugqa ngemva kwanoma iyiphi izinqubo zamazinyo njengoba isilinganiso izifo. Ngesisekelo zonke lezi imikhiqizo - izingxenye yemifino zemvelo, ezifana namafutha zikaphayini nut, * nomthidari, ezikhishwe zikaphayini, Aloe juice, amakhambi okwelapha: wort iSt John sika, Yarrow, sage, kanye nabanye. Khuluma izakhiwo ngendlela emangalisa ngempela lezi zingxenye, ngicabanga, hhayi zinkulu. Sonke, baye eside ajwayelekile.
izindlela ezisetshenzisiwe kulolu hide kungafaniswa nokuthutha isikhathi eside nsuku zonke, futhi ngezikhathi ezithile - izifundo ezimfushane uma kunesidingo.
Toothpaste "Ihlathi Ibhalsamu"
It has nethonya elizuzisa kokubili izinsini koqweqwe lwawo ngezinyo, nokususa izinqubo ukuvuvukala. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka nokuncipha ukusetshenziswa kwalo futhi ephelele "ukuqedwa" ukopha, uqinise koqweqwe lwawo. Isetshenziswa njengesici wokuxubha evamile okungenani kabili ngosuku, mhlawumbe ekuseni ngaphambi sokulala.
"Ihlathi Ibhalsamu" - conditioner
Amafutha has ukuphulukiswa nemiphumela analgesic, iphinde ivimbele uhlobo ezahlukene zezifo zamazinyo. Ngaphezu kwalokho, kuba nomthelela ongemuhle ku amagciwane ahlukahlukene kuleli ngalo ingaphakathi ngomlomo, kanjalo ubalekela halitosis. Sokuphuzisa ekwakhiweni: esetshenziswa ngokushesha ngemuva ukuxubha inqubo (emva ngamunye wathi okungenani izikhathi ezimbili ngosuku). Umlomo rinses iminithi elingu-okungenani eyodwa (mhlawumbe eziningana). Isixazululo akuyona kugwinywe. Ngemva uhlambulule kuyatuseka ethi ngeke adle noma aphuze ihora elilodwa. Into kuphela okufanele zicatshangelwe lapho usebenzisa lolu namafutha - it is hhayi Kunconywa izingane esingaphansi kweminyaka eyisikhombisa.
Umphumela zomuthi kungabonwa cishe ngokushesha: usuku noma ukunciphisa ezimbili okuphawulekayo ubuhlungu ngalo ingaphakathi ngomlomo, uma ikhona, anyamalale ukuvuvukala, ukuvuvukala kanye ukopha.
Enye indlela salolu chungechunge - gel "Ihlathi Ibhalsamu". Kulula ukusebenzisa, njengabanye izidakamizwa salolu chungechunge. Sebenzisa ezindaweni ezithintekayo we ngalo ingaphakathi ngomlomo futhi basakaza ngokulinganayo. Ngemva Lubrication libuye Kunconywa isikhathi esithile ukuba zidle ukudla noma uketshezi.
Uchungechunge imikhiqizo, "Ihlathi Ibhalsamu" okwamanje zithandwa kakhulu. Izibuyekezo ejabulela okukhulunywa kusho ninodwa omuhle. Iningi izidakamizwa izinzuzo ezilandelayo: kulula ukuyisebenzisa, abe isenzo okusheshayo, ngempumelelo, ekudambiseni ubuhlungu nokuvuvukala nokunye.
Kodwa labo nge amalungiselelo of lo mugqa engazazi, singakwazi batusa kubo ukuze zisetshenziswe. Umphumela kumele sifane, ngoba amazinyo enempilo futhi izinsini - akha ukumamatheka hhayi kuphela enhle, kodwa futhi ajabule, kanye ukuphila ngaphandle ubuhlungu.
"Pefloksatsina": yokusetshenziswa, analogue, ifomu ukukhululwa ukubuyekezwa. "Pefloxacin-akos": yokusetshenziswa
St. Christopher Pseglavets. Icon of St. Christopher. Ithempeli laseSt. Christopher
Ukudalwa ihhashi kusukela iphepha esebenzisa amasu ahlukene